Global Voices teny Malagasy » Azia Atsimo: Mifanakalo resaka ny olan’ny rano ireo mpitoraka blaogy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Oktobra 2010 16:24 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Candy
Sokajy: Azia Atsimo, India, Nepal, Pakistana, Fahasalamàna, Sakafo, Tontolo_iainana, Voina
Blog Action Day  dia hetsika fanao isan-taona isaky ny 15 Oktobra izay iarahan'ny mpitoraka blaogy manerantany manoratra mikasika olana iray iraisana amin'ny andro iray mitovy. Tamin'ity taona ity dia ny “rano” no foto-kevitra. Maromaro ihany koa ireo mpitoraka blaogy avy any Azia Atsimo no nandray anjara tamin'ity hetsika ity. Ndeha hojerena izay nosoratan'ny saany amin'izy ireo.
Manoratra  Ishrath ao amin'ny Wandering Mist :
Tsy araka ny eritreretina ny rano any India . Sady fitahiana no ozona izy manomboka any avaratra ka hatrany atsimon'ny firenena. Any avaratr'i India no teraka ny rano. Ny any ataimon'i India miady amin'ireo renirano mikoriana ao. Ny Avaratra-Andrefan'i India dia tany efitra tsy misy rano. Ary ny atsinanan'i India kosa manana ny rotsak'orana avo indrindra izay tsy manampy na iza na iza.
Adinontsika ireo fomba fiainantsika tamim-pahaizana  izay nampiasàna fa tsy norobarobàna tamin'ireo loharano natoraly tahaka ny rano. Tsy nisy fidiovana tsy manam-petra izany, famanàn-drano, fetin'ny orana, na siniben-drano mba hahazoana toky fa hitohy hikoriana ny rano mandritra ny fotoana fidiovana. Notsinjaraina araka ny fampiasàna azy ny rano. Tsy nisy izany fiheverana famatsian-drano 24ora/7andro izany any amin'ireo faritra izay tsy maintsy nandavahan'ny isam-pianakaviana ny anjara taniny [Avy amin'ny mpandika: manao lava-drano]. Miaraka amin'ny fahaizana amam-pahalalàna ary ny fandraisana andraikitra, dia ovàntsika ho helo hatrany ny tany iainantsika,.
Manome  torolàlana 25 hitahirizana rano i Aastha Kukreti ao amin'ny Delhi Greens. Mampahafantatra  i Abha Midha :
Ao India, nitarika fiovàna ara-tsosialy ny Hetsika Sulabh  teo amin'ny sehatry ny fahadiovana. i Dr Bindeshwar Pathak no nanomboka azy, mora vidy ny toeram-pivoahana Sulabh ary vahaolana mitsinjo sy manaja ny tontolo iainana ho an'ny olona.
Manazava  ny olana momba ny rano any Nepal i Bhumika Ghimire:
Namoaka sary  mampiseho ny fifandraisan'ny rano amin'ny fiainantsika andavan'andro, i Ujjwal Acharya.
Na dia niharitra ny tondra-drano ratsy indrindra tao anatin'ny zato taona aza i Pakistan, maina ary miha-karankaina ny faritra sasany ao aminy. Manamarika  i Khalida Brohi, ankizivavy teratany avy any Balochistan any Pakistan fa ireo olona teratany foana no voadona mafy indrindra amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro:
Jalal HB, ao amin'ny Fire Within, dia manoratra  momba ny tsy fahampian-drano madio any amin'ny tany efitr'i Thar any amin'ny faritr'i Sindh:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/10/22/10087/
 Tsy araka ny eritreretina ny rano any India: http://www.indiawaterportal.org/
 fomba fiainantsika tamim-pahaizana: http://treesouls.com/eco-conservation/anupam-mishras-ted-talk-on-the-ancient-ingenuity-of-water-harvesting/
 Hetsika Sulabh: http://www.sulabhinternational.org/st/sulabh_public_toilet_complexes.php
 Namoaka sary: http://www.nepalivoices.com/nepal-blog/2010/10/15/w-a-t-e-r/